I-Eden Teahupoo, enhliziyweni ye-Aihere fenua
Suka kuyo yonke imvelo enhliziyweni ye-Aihere fenua futhi ujabulele le ndawo eseceleni ecashile ohambweni lwakho lwangaphandle oluya e-Peninsula yaseTahiti. I-Tropical oasis engenamigwaqo, engenazixuku, kude nanoma yiluphi uhlobo lokuyaluza. Imvelo ecwebezelayo nephunga elimnandi isalondoloziwe, ulwandle oluyimfihlo olunokufinyelela okuqondile echibini. Iyiqiniso futhi enokuthula, indawo ekahle yokuzikhulula njengombhangqwana, abangani ... Sikunikeza ukudluliselwa kwesikebhe ngosuku lokungena nokuphuma.
Woza uthole le ndawo isagcinwe kuso sonke isiqhingi, ngemva kokuphela komgwaqo iTeahupoo.
Indawo yokuhlala inikeza indawo enokuthula ngokuvumelana ngokuphelele nemvelo, phakathi kolwandle nezintaba, isitayela sokuqala nesikhululekile sasePolynesia.
Ibhishi langasese kanye ne-lagoon kuwuhambo olufushane ukusuka endlini. Ama-kayak angawodwa nakabili anikezwa mahhala ngokuzijabulisa kwakho, kanye nezinto zokusebenza ze-snorkeling.
Ukufinyelela kwe-Wifi kuyatholakala kuyo yonke indawo.
Kungenzeka futhi ukwenza amalungiselelo ngaphambi kokuza. Sinikeza isitolo segrosa esincane esizeni endaweni yokuhlala. Ngesikhathi sokuhlala kwakho singenza ama-shuttles wesikebhe (i-10 kuya ku-15min) ukuya edolobhaneni laseTeahupoo ngesicelo (ngezindleko ezengeziwe). Singakwazi futhi ukuhlela kalula uhambo lwakho lwesikebhe se-lagoon, bheka igagasi elidumile le-Teahupoo, ukudoba echibini, ukuntweza kanye nokudluliselwa edolobhaneni laseTeahupoo, indawo yokudlela ... ngesicelo, ngezindleko ezengeziwe.
Indawo yokuhlala ifinyeleleka ngesikebhe. (Imizuzu eyi-15 uwela usuka edolobhaneni laseTeahupoo)
Sizokulanda endaweni yethu yokuhlangana, e-Private Marina etholakala kwesokudla ngemva kwesitolo seTeahupoo.
Ungaya eMarina yangasese, nemoto yakho, imoto, isikuta noma
ngeBHASI, imali yokugibela ingu-765F Round Trip kusukela e-Papeete-Teahupoo, thatha ulayini oqondile 30B ukusuka esikhumulweni sesikebhe sasePapeete, noma ulayini 23B Papeete-Taravao kanye no-30 * Taravao-Teahupoo, amathayimithebula akuwebhusayithi yeTere Tahiti.
Isitobhi sebhasi siyisitolo seTeahupoo kodwa ungacela umshayeli webhasi ukuthi akwehlise endaweni yokupaka izimoto ngemva kwesitolo saseTeahupoo.
Noma ungafika futhi ngetekisi esuka esiteshini sase-Papeete Maritime.
Sizobe sesikwamukela futhi ngesikebhe sethu sizokulethela epharadesi lethu elincane!
Futhi kubalulekile ukusho ukuthi uma unquma ukubhuka i-cottage yethu, sizokuthinta nge-imeyili izinsuku ezingu-4-5 ngaphambi kokufika kwakho nalo lonke ulwazi ukuze usifinyelele kalula.
(Intengo izimoto yokupaka ku Private futhi Secure Marina kuyinto 500F / Day. Ukuze ikhokhwe kumnikazi epaki imoto ekupheleni kokuhlala kwakho.) Kungenzeka futhi ukwenza amalungiselelo ngaphambi kokuza noma ekhaya kwezidingo on ukubiza. Ngesikhathi sokuhlala kwakho siphinde sinikeze ama-shuttles (10 kuya ku-15min) edolobhaneni laseTeahupoo ngesicelo ngezindleko ezengeziwe.
Sizotholakala zikhathi zonke.